लोक दोहोरिमै इतिहासमै नया रेकर्ड बनायो बिनोद र अनिता खड्काको पहिलो गीतले, २४ घण्टा नबित्दै १ नम्बर ट्रेन्डिङमा राज गर्दै ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
जानकारी भिडियो संगीत
March 3, 2021 AdminLeaveaComment on लोक दोहोरिमै इतिहासमै नया रेकर्ड बनायो बिनोद र अनिता खड्काको पहिलो गीतले, २४ घण्टा नबित्दै १ नम्बर ट्रेन्डिङमा राज गर्दै ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
यसैबीच,केही समय अगाडि सामाजिक सन्जाल र टिकटकमा एउटा महन श्रीमानका रुपमा चिनिएका बिनोद खडका र उनकी श्रीमती अनिता खडकाको पहिलो यथार्थ जिबनक`हानी सम्बन्धि गित लिएर सबिन पुनः दर्शक स्रोता माझ प्रस्तुत भएका छन् । गुल्मी पिपलधाराका बिनोद केही समय देखि श्रीमती अनिताको ब्रेन हया`म्रेज जस्तो रोगस“ग लडनको लागि धेरै प्रयास गरे र अहिले धेरै सुधार आएको छ ।
हो उनै श्रीमान श्रीमतीको वास्तविक कथामा आधारित “जिन्दगीले ठ`ग्यो” बोलको गीत सबिनले शनिबार लेकसाइड टिभीको युटुब च्यानलबाट रिलिज गरेका हुन् । गीतमा लोकप्रिय गायक रेशम निर्दोष र गायिका सुनिता बुढाक्षेत्रीको सुमधुर आवाज रहेको छ। गीतका का`रुणिक शब्द नेत्र अर्यालले लेखेका हुन् भने संगीत महेन्द्र भण्डारीले गरेका छन् । गीतले सुन्ने जोकोहीको मन भा`वुक गराउँछ।
रिलिज भएको २४ घण्टा नपुग्दै गीत युटुबको ट्रेन्डिङ १ को यात्रामा उ`क्लिन सफल भएको छ। यो समाचार तयार पार्दा सम्म युटुबको १ नम्बर ट्रेन्डिङमा रहेको छ। गीतको अडियो भिडियोलाई लिएर हजारौं बढी सकारात्मक प्रतिक्रिया युटुबमा देख्न सकिन्छ। उसो त गीतको अडियोसंगै भिडियो पनि का`रुणिक भएको भएर होला छोटो समयमै गीतले दर्शक स्रोताको अत्याधिक साथ पाउन सफल भयो।
भिडियोमा कलाकार रुबिना अधिकारी , बिनोद खड्का र अनिता खडका फिचर्ड छन् । उनीहरूको जीवन्त अनि कारुणिक अभिनय भिडियोमा देख्न सकिन्छ। जुन अभिनय हेर्दा आँखा र`साउने गर्छन् । भिडियोलाई बिनोद भण्डारीले निर्देशन गरेका हुन् । राजेश घिमिरेले खिचेको भिडियोलाई मनोज कार्कीले सम्पादन गरेका हुन् । गीतको अडियो भिडियो निर्माण सबिन स्वयंले नै गरेका हुन् ।
चम्सुरिका भाइरल र एकदमै राम्रा टिकटकहरु ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)